CFA VS. CPA - Yikuphi Certification kuyinto Better? [It's a Close Call]
CFA vs CPA: Iyiphi Kuhle Kuwe?
23 Aug CFA vs CPA: Iyiphi Kuhle Kuwe?
Updated:Okthoba 17, 2018
Ochwepheshe ezezimali ezivame ukuphishekelwa neziqu professional ukuze bazithuthukise emisebenzini yabo. Certified Accountant Yomphakathi (CPA) futhi Chartered lwezezimali Analyst (CFA) kukhona debatably izihloko ezimbili yodumo emasimini abo abafanele. Yiziphi umehluko, futhi yimuphi ongcono? Umehluko oyinhloko phakathi kwalezi zinto zombili yizo isikhundla ngamunye ihlanganisa futhi amathuba ama-career. CPA ubhekwa "ibhande black accounting" futhi kukulungiselela imisebenzi Accounting kanye nokuhlola, kuyilapho, CFA Uhlelo focusses ku Investment Management elithatha izihloko ezibanzi efana Ezezimali Corporate, Portfolio Management, Izisetshenziswa ezilethwayo, okungaguquki Income, Alternative Investments futhi kukulungiselela imisebenzi Ibhange lokubeka, Portfolio Management, Lwezezimali Ucwaningo njll. Kunokuba Ngokubuza lo mbuzo ukuthi "ikuphi okungcono?", kufanele ukubuza "okuyinto kungcono wena".
CFA vs CPA: Isicelo
CFA noma CPA: Ukuhlolwa kokuqukethwe kanye Ifomethi
Ngakho, Yikuphi Okungcono?
A-CPA yigama for Accountants angekho esidlangalaleni, ezimali zentela, kanye nezifundiswa ezezimali abafuna isihloko esifakazela nobuchwepheshe babo inombolo crunching. A-CPA futhi unamalungelo osemthethweni ngemvume umbiko audit okwenza ekhethekile isihloko. Ngokwe AICPA, CPAs cishe uthole 10-15% ngaphezulu uma sebeqala ukusebenza kuqhathaniswa ezimali ze-non-credentialed. Futhi CPAs kukhona sikhange ngokwengeziwe kubantu ezisebenza abaqashi okungezona CPAs. Ngokusho U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), ezimali, mabhuku imisebenzi, okuhlanganisa CPA sika phakathi kwezinye ezimali ochwepheshe, abangu kulindeleke ukuba akhule by 13 amaphesenti phakathi 2012 futhi 2022.
I-CFA lesihloko kuyinto ejwayelekile igolide e ezezimali kanye nokutshalwa kwezimali. Uma ufuna umsebenzi njengoba ukulingana abahlaziyi, abaphathi isikhwama, kanye nezifundiswa ukuphathwa kwempahla noma isikhwama izindlu uthango, lokhu isihloko engcono ungathola. CFAs ukugxila ukuphathwa utshalomali.
Abaqashi phezulu CFAs zihlanganisa izinhlangano abahlonishwa kakhulu zezimali emhlabeni, njenge, JPMorgan, Citigroup, Ibhange lase-America, and Wells Fargo.
Eziningi zalezi amabhange utshalomali, kodwa Uhlelo CFA budlulela ngalé kwalokho ku esibheka ulwazi kanye namakhono eqondene jikelele ukuphathwa utshalomali umsebenzi ngokombono nongoti.
Nendlela yokufaneleka sesihloko CPA likhulu kunawo wonke phakathi kwazo zonke iziqu ezezimali ezihlobene. Kufanele ube okungenani engu-4 impohlo degree, futhi ezimweni eziningi, 150 credit amahora (okulingana 5 neminyaka imfundo ephakeme) ukuhlala icele ukuhlolwa. Ilayisensi ye-CPA sivunyiwe ngu ngamunye 55 uthi noma yomthetho e-United States. Ngenxa isithiyo eliphezulu entry ngokungenakulinganiswa neyinkimbinkimbi ngokungaphezulu inqubo yesicelo, kunzima kakhulu inqubo inselele. I-CFA yigama elinikezwa CFA Institute, a global inhlangano engenzi inzuzo. Lesi sikhungo isuselwe e-US, kodwa kukhona 3 amahhovisi ezifunda kanye 200 local chapters around the world. Ungafaka isicelo ngokusebenzisa sikhungo futhi isicelo lilula. Uma nje unayo iflegi (akusho ukuthi 4 iminyaka), uhlale ukuhlolwa. Ungathatha ngisho ukuhlolwa bengakaqedi nezifundo zabo
I ukuhlolwa CPA has 4 izigaba ukuhlolwa: lwezezimali Accounting & Ukubika, Audit & Nobufakazi, Regulation and Business Imvelo & Concepts. Ukuhlolwa kuyinto 100% nge-computer ehlanganisa imibuzo choice multiple, sekusetshenziswa umsebenzi-based (leyinye), nezokuxhumana ebhaliwe. Ungakhetha ukuthatha 4 izingxenye eyodwa ngesikhathi, 2 ngesikhathi, noma 4 ngesikhathi esifanayo. Ungakwazi uhlale ukuhlolwa yisiphi isikhathi CPA ukuhlolwa ukuhlolwa iwindi, okuyinto esokuqala 2 izinyanga ikota ngalinye futhi ngasiphi izikhungo prometric lonke elase-US. Kukhona futhi ehlola izikhungo Japan, Brazil kanye 4 amazwe-Middle East.
amabhodi Iningi isimo zidinga emhlabeni 1 ngonyaka accounting nakho ngaphambi kokuthola ilayisensi, futhi uthi iningi lokhu okuhlangenwe nakho kuye ukuba abaqondiswa futhi yaqinisekiswa yi-CPA asebenzayo.
I-CFA ukuhlolwa format nezimo ingasaphathwa. Bangu 3 amazinga ukuhlolwa, futhi udinga ukuqedela nabo oda efanele ukudlulela olandelayo. Ukuhlolwa igxile ukuhlaziywa kanye iphothifoliyo zezimali nokuphathwa esikhundleni ezimali, audit kanye intela. Ukuhlolwa iqondiswa kabili ngonyaka Level 1, futhi kanye ngonyaka Level 2 futhi 3. Ziningi ukuhlolwa izikhungo amazwe CFA ukuhlolwa emadolobheni amakhulu kanye ezindaweni zasemadolobheni ezingu. Nakuba ngobuchwepheshe ungakwazi ukuqedela ukuhlolwa CFA ngaphakathi 18 izinyanga (level 1 ngo-December, level 2 ngo-June, level 3 ngoJuni ngonyaka ngemva), ukhetho kakhulu ukuthatha 4 iminyaka ukuluqeda lolu izivivinyo. Kuthatha isikhathi eside ukuba abe CFA ngaphandle CPA. Kudingeka ukuthi ube 4 oseneminyaka engu-efanele ukuze uthole CFA isiqu. umphathi wakho, abayobe ngokuqinisekisa umuzwa wakho, ayidingi ukuba CFA.
Uma sinquma ukuthi ukuya for CFA noma CPA, into ziqale futhi udinga ukuthi ucabange ngalokhu kuba umsebenzi wakho. Ngaphandle kwalokho, isihloko CPA has obanqabelayo imfundo kanye nesipiliyoni imfuneko, kodwa uma uthola wakufanelekela, le nqubo isheshe. CFA has a aphansi ezivimba kodwa kuthatha isikhathi eside kakhulu ukuze uqedele. Isinqumo phakathi kwalezi ezimbili ekugcineni wena imigomo yakho umsebenzi. Qalisa futhi ne engcono CPA ukubuyekeza Course noma find the best CFA Study Materials
CPA, Roger CPA ukubuyekeza, Isaphulelo okukhethekile, Isaphulelo Deep 35 isebenzisa namuhla
CPA 35 isebenzisa namuhla
CPA, Surgent CPA ukubuyekeza, Isaphulelo okukhethekile 40 isebenzisa namuhla
kugcinwe ukusetshenziswa 43 amaminithi adlule
Usuku lokuphelelwa isikhathi: Okthoba 20, 2018
CPA, Wiley CPAexcel, Isaphulelo okukhethekile 36 isebenzisa namuhla
kugcinwe ukusetshenziswa 47 amasekhondi adlule
CPA, Surgent CPA ukubuyekeza, Isaphulelo okukhethekile 38 isebenzisa namuhla
CPA, Wiley CPAexcel, Ukunikezwa okubalulekile 34 isebenzisa namuhla
kugcinwe ukusetshenziswa 13 amaminithi adlule
CPA, Roger CPA ukubuyekeza, Isaphulelo okukhethekile 38 isebenzisa namuhla
Usuku lokuphelelwa isikhathi: Okthoba 18, 2018
CPA, Isaphulelo okukhethekile, Tunzale Academy 36 isebenzisa namuhla
kugcinwe ukusetshenziswa 22 amaminithi adlule
CPA, Ukunikezwa okubalulekile, Crush The CPA 35 isebenzisa namuhla
CPA, Roger CPA ukubuyekeza, Isaphulelo Deep 40 isebenzisa namuhla
kugcinwe ukusetshenziswa 10 amaminithi adlule
CPA, Yaeger CPA ukubuyekeza, Isaphulelo okukhethekile 37 isebenzisa namuhla
CPA, Gryfina, Isaphulelo okukhethekile 33 isebenzisa namuhla
kugcinwe ukusetshenziswa 18 amaminithi adlule
kugcinwe ukusetshenziswa 11 amaminithi adlule
CPA, Wiley CPAexcel, Isaphulelo okukhethekile 34 isebenzisa namuhla
CPA, Roger CPA ukubuyekeza, Ukukhokhela Ukunikeza 40 isebenzisa namuhla
kugcinwe ukusetshenziswa 9 amaminithi adlule
CPA, Surgent CPA ukubuyekeza, Isivivinyo samahhala 41 isebenzisa namuhla
CPA, Roger CPA ukubuyekeza, Okunye 41 isebenzisa namuhla
CPA, Wiley CPAexcel, Okunye 35 isebenzisa namuhla
CPA, Wiley CPAexcel, Isaphulelo okukhethekile 40 isebenzisa namuhla